Motivation for success :: थोरै लगानी र राम्रो प्रतिफलका लागि भैँसी पालन, ब्यवसायिक भैँसी पालन गर्ने तरिकासहित (भिडियो)
प्रकाशित मिति : मंगलबार, फाल्गुन १८ २०७७
काठमाडौँ – तपाईँ आफूले खाइरहेको जागिर वा गरिरहेको व्यवसायमा कतिको सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ ? तपाईँलाई आफ्नो काम गर्ने कम्पनी वा व्यवसाय बन्द भयो भने मेरो अवस्था के होला भन्ने चिन्ताले सताउँछ ? तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा तपाईँको भूमिकाको कतिको सम्मान हुन्छ ? कि तपाईँका बोसलाई तपाई नभए पनि आफ्नो कम्पनी चल्छ भन्ने दम्भ छ ? यदी तपाईँ यी समस्यासँग जुधिरहनुभएको छ भने यो भिडियो तपाईँका लागि अति उपयोगी छ।
कुनै दिन प्रेसको जागिर खाइरहेका सुदूरपश्चिमका सहदेव निरौलालाई त्यति बेला सम्म आफ्नो करियर सुरक्षित लाग्थ्यो जति बेला उनले प्रेसबाट निकालिदिने धम्की पाए । त्यो भन्दा अझै बढी त उनका बोसले सानो सानो कुरामा प्रेस नै बन्द गरेर तिमिहरूको रोजीरोटी बन्द गरिदिन्छु भनेर धम्की दिन्थे। जिन्दगीमा उनले जानेको मात्रै दुई वटा काम थियो। एउटा प्रेसको अनि अर्को पशुपालन ।
यही पिडासँग जुध्दै गर्दा उनले एक दिन आफू बस्ने ठाउँ नजिकै घाँस काटिरहेका एक जना व्यक्तिलाई भेटे र कुराकानी पनि गरे। त्यही कुराकानी नै उनको जीवनको महत्त्वपूर्ण टर्निङ प्वाइन्ट बन्न पुग्यो। गाउँमा दुई वटासम्म गाईरभैंसी पालेको देखेका उनी यो सहरमा त्यही काम गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्दा आश्चर्यचकित भए। आफू पनि गरिहेर्ने सोचले उनले एउटा गाई खरिद गरी सुरु गरे व्यावसायिक पशुपालनको यात्रा ।
सहरमा जागिर खाएर गुजारा गरिरहेको मान्छे अचानक व्यवसायको सोच राख्नु उनका लागि सहज थिएन। गाई पाल्नका लागि उनको पहिलो आवश्यकता थियो उपयुक्त जग्गा । यसरी एउटा गाई र एउटा भैँसीबाट सुरु भएको उनको व्यवसायले आज उनलाई ठुलो व्यावसायिक सफलता दिलाएको छ। ललितपुरको भैँसेपाटीमा आज व्यवस्थित संरचना सहितको निरौला कृषि फर्म सञ्चालनमा छ ।
यो कृषि फार्ममा उनको परिवारको पनि साथ र सहयोग रहेको छ। जागिर खाइरहेकी उनकी श्रीमती पनि हाल जागिर छोडेर उनीसँगै सहकार्य गर्छिन् भने उनका छोराहरू समेत काममा सघाइरहेका छन् ।
आफूले पालेका पशु चौपायालाई आफ्ना सन्तान जत्तिकै माया गर्ने निरौला आफूलाई कहिल्यै फार्म छोडेर बाहिर जान वा बस्न मन नलाग्ने बताउँछन् । यदि एकदमै जरुरी भएर बाहिर निस्कनु परेपनि उनी छिटै फार्ममा फर्किन्छन् । उनको फर्ममा हाल दैनिक करिब १५० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये करिब ८० लिटर आफैले पोका पारेर घरघरमा पु¥याउँछन भने बाँकी डेरीलाई दिने गरेका छन् ।
गाई पाल्ने किसानहरूले बाच्छालाई सडकमा छोड्छन् भनेर समय समयमा हुने आलोचना बारे प्रश्न गर्दा निरौला त्यो समस्या सबैको भएको स्विकार्छन् । तर उनीहरूले भने पैसा दिएर गाउँतिर जोत्नका लागि भनेर पठाउने गरेका छन् । करिब ११ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उनको फार्म अहिले भाडाको जग्गामा सञ्चालनमा छ। आफ्नो जग्गा नहुँदा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको र गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा छ।
पशुपालन गर्दा आफूलाई विदेश जानू नपरेको र अन्त गर्ने दुख आफ्नै देशमा गर्दा आफ्नै परिवार सँग दुख सुख साट्न पाइएकाले उनी यो पेसाबाट पूर्ण सन्तुष्ट छन् । नेपालमा पशुपालनका अवसर र चुनौतीलाई उनी यसरी उल्लेख गर्छन् ।
यी चुनौतीहरूका अलावा नेपाली पशुपालन किसानले अन्य विभिन्न समस्याहरू सँग जुध्नुपरेको छ। पिठो, दाना लगायतका सामान समयमा आउँदैन भने मूल्यमा एकरूपता पाइँदैन। बाटो देखि पानीको असुविधाले समेत यिनै किसानलाई सताउने गरेको छ। नेपाल सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम र अनुदानका प्याकेजहरू ल्याएको भए पनि निरौला जस्ता वास्तविक किसानहरू त्यसबाट टाढै छन् । पहुँच हुने र झोलामा फर्म बोकेर हिड्नेहरूकै हालीमुहाली रहेको गुनासो उनी गर्छन् ।
ऊर्जाशील समयमा युवाहरू विदेश जानुहुन्न भन्ने मान्यता उनको छ। त्यसैले आफ्नै छोराहरूलाई पनि उनले विदेश जाने नभई देशमै केही गर्ने सल्लाह दिएका छन् । विदेशमा गर्ने मेहनत देशमै गर्नसके त्यो भन्दा राम्रो जीवनशैली यहीँ बनाउन सकिने उनको धारणा छ।
सहदेव निरौला आफूजस्ता पशुपालन किसानलाई आफूले जाने बुझेको कुरा सिकाउन सधैँ तत्पर छन् । तलको भिडियो हेरेर तपाईँमा पनि उनलाई भेट्ने र परामर्श लिँदै व्यवसाय सुरु गर्ने रहर जाग्यो भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।